Ity no ilainao ho fantatra momba ny fiovam-po YouTube - YTpals
Ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy, ao anatin'izany ny marketing amin'ny YouTube, dia momba ny fandrefesana, ny fianarana ary ny fametrahana ny tongotra tsara indrindra. Rehefa mihamaro ny olona mivadika amin'ny horonan-tsary an-tserasera (82 isanjaton'ny fifamoivoizana rehetra dia mety ho avy amin'izy ireo amin'ny 2022), dia ho tranga lehibe ny dokambarotra YouTube.
Afa-tsy izany koa, Google izao dia mamela ny mpivarotra an-tserasera hampiasa angona fikarohana avy amin'ny algorithman kendren'ny YouTube ary amin'izao fotoana izao dia mitondra algorithma tsara kokoa hahafahany manome ny Smart Bidding mifantoka amin'ny CRO bebe kokoa amin'ny fampielezana doka amin'ny YouTube.
Raha resaka fiovam-po no resahina, ny doka YouTube dia miasa tsara amin'ny antony lehibe mahatonga azy ireo amin'ny endrika video. 18 isan-jaton'ny mpivarotra horonantsary voalohany no nanomboka nampiasa horonantsary tamin'ny taona 2019 satria mahatsapa mazava kokoa momba ny ROI an'ny horonan-tsary izy ireo.
Ho fanampin'izany, 80 isan-jaton'ny mpivarotra horonan-tsary no mino fa ny atiny video dia nanamafy ny varotra. Ity no antony ampy hahatongavan'ny 90 isan-jaton'ny mpivarotra horonan-tsary na hampiakatra na hihazona ny fandaniany amin'ny vidéo.
Ahoana no ahafahanao mandrefy ny fiovam-po mitranga amin'ny YouTube?
Ny dokam-barotra YouTube dia tsy mitovy amin'ny dokam-barotra pay-per-click (PPC). Ilay voalohany dia toy ny dokam-barotra an-tsoratra na an-gazety, fa ity farany kosa dia ny fampiasana isa, statistika, tabilao ary sary mba hahitana ny sanda azon'ny mpanjifa isaky ny vola laniny rehetra. Amin'ny dokambarotra YouTube, azo atao ny mampifanaraka ny varotra sy ny fiakaran'ny mpijery, fa ny isa azo avy amin'ny fandrefesana ny doka manokana YouTube dia tsy mafy sy haingana.
Ampidiro ny AdWords, izay ahafahan'ny mpanao dokambarotra YouTube manara-maso sy mandrefy refy isan-karazany toy ny fahitana sy ny tahan'ny fahitana. Ity fitaovana marketing ity koa dia afaka manaparitaka ny tahan'ny click-through sy ny vidiny isaky ny mijery, ary koa ny firotsahana fantsona. Io dia ahafahan'ny mpanao dokam-barotra manamarina ny fomba fahitany azony, izay mitranga aorian'ny fahitan'ny mpijery horonantsary faharoa an'ny marika aorian'ny fijeriny ny voalohany. Ilaina ity metrika ity mba hitazonan'ireo mpanao dokambarotra ny tahan'ny fihenam-bidy.
AdWords dia afaka manampy ny mpanao dokam-barotra hanaraka ny fikarohana teny lakile - zavatra iray afaka mametaka azy ireo amin'ny demografika manokana hanovana ireo teny lakile sy hamaly ny fangatahan'ny mpanjifa mavitrika. Adwords dia azo ampiasaina amin'ny Google Analytics, fitaovana iray izay afaka manampy ny mpanao dokambarotra handrefy ireo mpitsidika vaovao, pejy isaky ny fitsidihana ary ny tahan'ny fiakarana. Ny Funnels Multi-Channel (MCF) an'ny Google dia manome fijery sarobidy momba ny fiovam-pon'ny mpijery ihany koa amin'ny alàlan'ny dian'ny mpijery, manomboka amin'ny fijerena voalohany ka hatramin'ny fiovam-po, famandrihana ary fividianana.
Ahoana ny fomba hanamafisana ny fiovam-po amin'ny YouTube?
Rehefa manana hevitra ara-drariny momba ny fandrefesana ny fiovam-po YouTube ianao dia azonao atao ny manaraka ny torohevitra etsy ambany hanamafisana azy ireo:
Ampidiro ny paikady hampidirana ny rafitra "tsindrio manaraka", izay ahafahan'ny mpijery anao mandray andraikitra aorian'ny hijerena ny horonantsarinao YouTube. Azonao atao ny mandroaka azy ireo mankany amin'ny pejy fipetrahana manokana ao amin'ny tranonkalanao, mijery horonan-tsary hafa ao amin'ny fanangonana anao, na mampiditra azy ireo amin'ny Facebook, Instagram na fantsona media sosialy hafa.
Ataovy manintona araka izay azo atao ny sary momba ny horonan-tsary. Thumbnails dia midika fotsiny hoe inona no dikan'ilay horonan-tsarinao. Tsindrio eo amin'ny horonan-tsarinao izy ireo rehefa avy resy lahatra fa misy zavatra mifandraika amin'ilay horonan-tsarinao. Alao antoka àry fa mamorona sary kely mahasarika ny maso amin'ny horonantsary YouTube-nao ianao.
Hamarino tsara fa ny horonan-tsarinao YouTube dia jerena hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny algorithman'ny sehatra video dia tia horonan-tsary izay manana fotoana fijerena lava be. Alao antoka fa fohy ny horonan-tsarinao ary mampita ny hafatrao ao anatin'ny fetra voafetra.
Hamarino tsara fa tsy mihoatra ny 180 ny litera misy ny lohateninao. Io dia ahafahana miseho amin'ny horonantsary findainao. Ary koa, tokony hampiasa teny fanalahidy 10 ka hatramin'ny 15 ianao hiseho amin'ny fikarohana.
Mamorona playlists ao amin'ny YouTube mba hanjakanao amin'ny akany. Ny famoronana playlists dia fomba azo antoka hampidirana ny mpijery anao amin'ny fantsonao.
Ny horonan-tsary YouTube dia fomba iray mahery hilazana ny tantaran'ny marika misy anao amin'ny fomba marina sy haingana. Ny fampiasana azy ireo amin'ny fampielezana horonan-tsary dia hanampy anao hitarika fifamoivoizana sy hanova ny mpitsidika ho mpanjifa tena izy.
Ity no ilainao ho fantatra momba ny fiovam-po YouTube avy amin'i YTpals Writers, 8 March 2020
Ireto misy fitaovana hanampiana anao hanatsara ny varotra YouTube anao
YouTube dia lasa behemoth raha ny momba ny atiny video. Miaraka amina olona an'arivony tapitrisa eo amin'ny lampihazo, manome ny olona ny fotoana hijerena mpijery manerantany ary hanana fanatrehana iraisam-pirenena. Miaraka amin'ny orinasa lehibe…
Fa maninona no mitodika any amin'ny Podcast ireo mpamorona horonantsary YouTube?
Fantatrao ve araka ny fanadihadiana nataon'ny University of Florida, YouTube no fomba malaza indrindra amin'ny fihainoana podcast? Eny, mamaky izany marina ianao. 43% amin'ireo mpihaino podcast isam-bolana no nandeha…